Mogadishu Journal » Kenya oo hoos u dhigtay xukun horay loogu riday xubin ka mid Al Shabaab
Kenya oo hoos u dhigtay xukun horay loogu riday xubin ka mid Al Shabaab
Mjournal :-Nin horay loogu eedeeyay inuu ka tirsanaa Al-shabaab una dhashay dalka Kenya ayaa xukunkii lagu riday laga qafiifiyay.
Elgiva Bwire Oliacha, oo 35 jir ah ayey Maxkamad ku taalla Kenya xabsi daa’in ku xukuntay lix sano ka hor kaddib markii lagu helay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab.
Waxaana Hadda lagu xukumay 15 sano oo xabsi ah, ka dib markii ay Maxkamadda Racfaanka kusoo oogtay inuu ka tirsan yahay Al Shabab.
Ciidanka Kenya ayaa sheegay in Ninkan ay ka qabteen deegaanka Kooyaale isaga oo watay Qori AK-47 ah,labo Bastooladood,717 Xabbo oo rasaas ah,hal Qori oo nooca SNG-ga ah iyo 13 Bambo gacmeed.
Ninkaan ayaa la waayay Foomkii lagu xukumay, waxaana Maxkamadda dowladda Kenya ay amartay in hoos oo dhigo xukunkii lagu riday.
Garsoorayaasha ka la ah Daniel Musinga, William Ouko iyo Gatembu Kairu, ayaa sheegay in ay caddeyn u waayeen in Ninkan uu ku dhaawacmay weerarka Baska waxaana jirkiisa laga waayay dhaawacyada kiis dacwadeedkiisa ka mid ka ah.
Waxaana lagu eedeeyay inuu ku lug lug haa weerarkii Kaka Bus, ee dhacay 24-kii October, sanadkii 2011-kii.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo guddi u saaray barakacayaal la saaray xeryihiin ay degenaayeen